Sirta Fasalka Qarsoon! Thor Schrock Dhibaatada Suuqgeynta Internetka Gurus
Sabtida, Diisambar 8, 2007 Axad, Oktoobar 4, 2015 Thor Schrock
** Madaxa kor u kaca **
Akhris ilaa dhamaadka fursad aad ugu guuleysato $ 1,000 CASH!
Doug iyo inbadan oo idinka mid ah ayaa igu taageeray showga 'Next Internet Millionaire show', in kasta oo aan ahaa orodyahanka labaad hadana waxaan helay fursad aad u wanaagsan oo aan wax uga barto qaar ka mid ah dadka ku xeel dheer suuq geynta internetka. Fasalka Qarsoodiga ah.
Aniguna waxaan ahaa arday AAD aad u wanaagsan. Xaqiiqdii runtii waxaan u qaadanayaa labo ka mid ah macallimiinteeydii hore ee macallimiinta, Marlon Sanders iyo Armand Morin kaynta ku taal Joel Comm's Barnaamijka Wadajirka ah ee Fasalka Qarsoodiga ah!
Waa tan waxa aan bartay iyo sida aan ugu garaacayo qaar ka mid ah kuwa ku iibiya internetka adduunka ugu fiican.
Noqo Suuq Ninja, ee ha noqon tuug Suuq geyn.
Marlon Sanders ayaa i baray aragtida ka dambaysa wax aan si dabiici ah u yaqaanay waagii hore. Wuxuu yiri awood kasta waxay leedahay daciifnimo la socota. Haddii aad ka soo horjeeddo tartame ka sarreeya, waa inaadan weerarin xooggooda. Waxaad rabtaa inaad weerartid daciifnimada la socota xooggooda.
Tusaale ahaan, haddii aad ka soo horjeeddo Best Buy oo aad isku dayeyso inaad iibiso kombuyuutarro, ha furin dukaanka super ka shaqeeya ee leh iibyo xirfadlayaal dhexdhexaad ah oo xirfad leh iyo xulasho ballaaran oo kombuyuutarro ah.
Bedelkeed iibiso kombuyuutarro tayo sare leh oo loogu talagalay baahiyaha isticmaalaha isla markaana bixiya adeeg abaalmarin ah iyo qorshe taageero ah oo lagu kaydiyo. Adoo weeraraya daciifnimada ku dhex jirta xooggooda, waxaad diidaysaa faa'iidada tartan ee Best Buy.
Burburka Badan Waxaad Tahay Mid Kafiican Sawirkaagu Ubaahan Yahay Inuu Noqdo
Goobaha sida Amazon, ama Google, ama Youtube waa degello malaayiin doolar ah oo leh astaamo ay aqoonsan yihiin dadka soo booqda dadkuna ay ku kalsoon yihiin
Armand Morin wuxuu ii sharaxay in wax shil ah uusan jirin xaqiiqda waxaad u maleyn kartaa astaamaha shirkad kasta oo kor ku xusan maskaxdaada hada.
Sidaa awgeed markii mid ka mid ah degelladan internet-ka ah ay kaa doonayaan inaad tallaabo qaaddo, haddii ay buug iibsanayso ama ay soo dejineyso fiidiyoow, waxay u badan tahay inaad tallaabadaas qaaddo maxaa yeelay waxaad ku kalsoon tahay inaad ku kalsoon tahay magaca iyo astaanta.
Qiimaha ugu badan ee aad ganacsiga ku gasho waa helitaanka macmiil markii ugu horreysay. Iibinta dugsiga sare ee isla macmiilku waa inay noqotaa meel lagu xardho haddii aad si sax ah u calaamadeysatay oo macmiilkaagu kuu aqoonsanayo marka xigta ee aad garaacdo.
Haddii Sawirku yahay 1,000 Erey, Muxuu Muhiim u yahay Fiidiyoowgu?
Adeegsiga fiidiyow si aad ugu socodsiiso taraafikada boggaaga waa qaab farshaxan, haddii aad si fiican u baratana waxaad yeelan doontaa qalab aad waxtar u leh oo dadka badankiisu iska indhatiraan.
Qof kastaa wuxuu dhejin karaa backlink laba ilbiriqsi gudahood. Biggie ma ahan inaad gasho Google Search. Laakiin qaadashada fiidiyowga waxay qaadataa waqti iyo xoogaa hibo ah. Dadka badankood ma yaqaanaan sida loogu wado taraafikada fiidiyowyo, sidaa darteed iskama khaldamaan.
Mike Koenigs Mike wuxuu i baray sida loo soo saaro fiidiyoow, ugana helo indhaha indhaha hortooda, ka dibna kubbadahaas indhaha ah websaydh. Wuxuu i baray sida loo isticmaalo fiidiyowyada si aan u wado taraafikada sida mashiinka raadinta oo kale, tanina waxay ahayd qayb aad u ballaadhan oo iga sarreysa kuwa kale ee suuqa guru.
Wuxuu sharraxay in dadku u dulqaadan doonaan fiidiyowga xun illaa hal dhibic, laakiin haddii codkaagu xun yahay, kama dhaafi doontid 2-da ilbiriqsi ee ugu horreeya. Haddii lacag aad ku qarash gareyneyso qalabka, marka hore soo iibso makarafoon fiican, ka dibna hesho kaamiro fiican.
Kadibna waxaa jiray $ 30 waa inuu haystaa qalabka nalka oo aad ka sameyn karto waxyaabaha ku jira Home Depot kaas oo iftiimin doona muuqaalkaaga oo dhan. Aqoon badan oo cabsi badan oo fiidiyowyadaada ka dhigi doonta mid laga cabsado oo kaa siin doonta waxoogaa dad kale oo yar oo fiidiyowyada qaarkood ku soo tuura khadka tooska ah.
Tail Dheer waa Blogger saaxiibkiisa ugu fiican ee taraafikada
Dave Taylor wuxuu sharraxay haddii aad si sax ah u dhisto boosteejo ay ka kooban yihiin waxyaabaha dadku doonayaan, waxaad ku goosan doontaa qaddar yar oo taraafikada boostadaas ah oo aan la cayimin mustaqbalka maadaama dadku raadinayaan waxay rabaan.
Ugu dambayntii dariiqa dabo dheer ee loo adeegsado qorista qorista qorista waxay soo saari doontaa gaadiid yar yar oo jiidaya oo isku dar ah illaa hal joogitaan websaydh ah.
Waxaad ka raadin kartaa wax uun khadka tooska ah waxaadna ka heli kartaa mid ka mid ah bogagga Dave Taylor meel natiijooyinka ka mid ah.
Iskuxidhka Guru Butt-Kicking
Halkii aan ka qaadan lahaa hal nidaam oo guru ah, waxaan isku darsaday habab badan oo ka socda Fasalka Qarsoodiga ah si aan u sameeyo mashiin suuq geyn ah oo ka awood badan macallimiintayda keligood.
Waxaan ku bilaabay seddex websaydh oo dhammaantood loogu talagalay in lagu horumariyo isla wax soo saarka. Goobo badan ayaa macnaheedu yahay fursado badan oo lagu dalbado dhibco 10-ka natiijooyinka goobidda ee ugu sarreeya laguna qasbo baraha kale hoos.
Waxaan si dhaqso leh ugu dhaqaaqay si aan uheliyo bogaggayga kahor hordhaca, iyo www.nextinternetmillionairedvd.com wuxuu ahaa degelkeyga calanka.
Anigoo raacaya taladii Marlon, waxaan u baahday inaan ku weeraro daciifnimo ku dhexjirta juggernaut Fasalka Qarsoodiga ah. Halkii aan ka ciyaari lahaa isla? Waxaan dhigay cookie kombuyutarkaaga ah? ciyaarta tixraaca, waxay ku weerareen Fasalka Qarsoodiga ah qiimaha iyagoo bixinaya lacag celin.
Joel wuxuu siinayaa $ 200 komishan gacansaar ah qayb kasta oo ka mid ah Fasalka Qarsoodiga ah ee aan iibiyo, markaa waxaan siiyay $ 100 lacag celin ah qofkasta oo wax ka iibsanaya websaydhyadayda. Waxaan ula jeedaa si dhab ah, haddii aad qorsheyneysay inaad iibsato setka si kastaba ha noqotee, maxaad u keydin weyday $ 100, sax?
Isla markii aan ogaaday in magaca DVD-ga uu noqon doono Fasalka Qarsoodiga ah, waxaan adeegsaday farsamooyinka aasaasiga ah ee SEO / SEM si aan ugu qabsado # 2 barta Google ee websaydhkayga Nextinternetmillionairedvd.com.
Marka xigta waxaan shaqaaleeyay koodh si uu iiga sameeyo foomka soo gudbinta emaylka oo ii oggolaaday inaan ku soo ururiyo magacyada iyo cinwaannada emaylka boggaga internetka oo aan ku kaydiyo keydka macluumaadka. Waxaan ku guuleystey inaan ururiyo in ka badan 170 hogaamiyeyaal dad ah oo daneynayay dalabkan dhimista ah.
Ka dib waxaan soo saaray 12 fiidiyoow Muusig ah oo Fasalka Muusig ah (1 loogu talagalay macallin kasta) oo laga sameeyay duubista shaashadda fiidiyowga iyo maqalka dhacdooyinka Next Internet Millionaire. Waxaan adeegsaday farsamooyinka Mike si aan u qoro cinwaanno, sharraxaado, URL-yo iyo farriimo saddexaad oo hoose oo waxqabad samayn lahaa. Kuwaas ayaan ugu galiyay goob kasta oo fiidiyow wadaag ah oo ku taal meeraha dunida.
Ka dib waxaan qabtay ku dhowaad dhammaan dhibcaha ugu sarreeya ee Google, Yahoo, iyo fiidiyowga Youtube raadinta ereyga fasalka sirta ah. Marka xigta, waxay ahayd waqtigii la weerari lahaa Raadinta Blog.
Waxaan bilaabay inaan dhajiyo boggeyga dhowr jeer maalintii anigoo adeegsanaya talobixinta dabo dheer ee Dave Taylor. Intii tartankeygu socday oo aan ciyaarayay dagaalladii cookie ee kaxeynayay taraafikada iyada oo loo marayo isku xirnaantooda xiriirka, waxaan aruurinayay cinwaannada emaylka iyo dhisidda xiriirrada.
Kadibna Diseembar 5 Joel ayaa jiiday kicinta. Waxaan email u qarxiyay liiskeyga, waxaan daabacay boosteejo blog ah, waxaan dhigay xayeysiiska Google Adwords, waxaanan galiyay bogaggeyga soo dejinta kadib.
Markay siigadu degtay, waxaan ahaa Joel's # 1 oo gacansaar leh maalinba maalinta ka dambaysa 1. Waxaan ka soo baxay Marlon Sanders iyo Armand Morin? aqooyahankii igu baray Fasalka Qarsoodiga ah. Weli way isu soo urursan karaan si ay iila wareegaan, laakiin taasi waa halka wajiga 2 uu soo galayo!
Waxaan kaa rabaa inaad iga caawiso inaan dhammeeyo shaqada oo aan caddeeyo in wadarta casharrada Fasalka Qarsoodiga ahi ay ka awood badan yihiin fadhi kasta oo shaqsiyeed.
Waxaan ordayaa a ku tartama boggeyga oo leh $ 1,800 oo lacag ah iyo abaalmarinno loo qabtay Waxa kaliya ee ay tahay inaad sameyso si aad tallaal ugu qaadatid ku guuleysiga waa inaad sameysid boosteejo, faallo ka dhiibato, oo aad ku darto xiriiriye blogroll ah.
Fiiri tartanka oo ii sheeg waxa aad u malaynayso. Waan sii dhejin doonaa Doug sidaan sameeyo, laakiin ujeedadaydu waa inaan dhammeeyo shaqadii aan ka bilaabay Colorado bishii Ogosto, markanna waxaan u maleynayaa Joel inuu ogaan doono.
Hogaanka Thor, sherkadda 'Schrock Innovations Computer Company' waxaa loogu codeeyay Lincoln s # 1 shirkad dayactir kumbuyuutareed madaxbanaan sanad walba ilaa 2001 suuq ay kujiraan tartamayaal badan oo dagaal badan. Thor wuxuu ka koray Schrock Innovation ka qarka u saaran musalifnimo sanadkii 2004 wuxuuna noqday $ 1.5 milyan sanadkii oo ah adeeg koronto sanadkii 2009 oo leh goobo ku yaal Omaha iyo Lincoln, NE.
Jun 26, 2008 saacadu markay ahayd 12:27 AM
$ 200.00? Taasi miyaanay ahayn sida $ 1500 loo dhigay oo aanad adigu ku jirin bandhigga laftiisa? Xaashida